Ndị isi nchịkọta akụkọ nke Ntuziaka Teknụzụ - Banyere anyị | Nzukọ Ekwentị
Nzukọ Ekwentị bụ ebe nrụọrụ weebụ AB Internet. Na weebụsaịtị a anyị na-emeso kekọrịta ozi niile gbasara ụwa nke teknụzụ: site na nkuzi site na ntinye aka na ozi emelitere, nyocha zuru ezu nke ngwa bara uru ma na-achọsi ike maka ụbọchị gị ruo ụbọchị.
Ndị nchịkọta akụkọ nke Móvil Forum mejupụtara otu ìgwè ndị ọkachamara na teknụzụ izugbe. Ha ga-enye gị ihe mmụta dị ugbu a ma sie ike banyere otu esi arụ usoro ụfọdụ na kọmputa gị, yana inyere gị aka n'ịzụ ndụmọdụ na ngwaahịa dị iche iche na teknụzụ.
Anyi hapuru gi ha niile ka imata ha nke oma. Nabata na Móvil Forum ma daalụ maka ịnwe anyị.
Emilio Garcia. Onye nhazi Mobile Forum na SEO ọkachamara lekwasịrị anya ịnye ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ. Iji mee nke a, ọ na - ejikọtara ya na ndị otu ndị edemede ọkachamara ga - ede banyere mpaghara ha.
Kọmputa m mbu bụ Amstrad PCW, kọmpụta nke m bidoro were were ihe mbụ m na-eme. N'oge na-adịghị anya, 286 batara n'aka m, nke m nwere ohere ịnwale DR-DOS (IBM) na MS-DOS (Microsoft) na mgbakwunye na ụdị mbụ nke Windows ... Ihe na-adọrọ mmasị na ụwa nke sayensị kọmputa na mbido 90s, duziri ọrụ m maka mmemme. Abụghị m onye emechiri na nhọrọ ndị ọzọ, yabụ ana m eji Windows na macOS kwa ụbọchị ma na-atụgharị Linux distro. Sistemụ arụmọrụ ọ bụla nwere ezigbo akara ya na isi ọjọọ ya. Onweghi onye ka ibe ya mma. Otu ihe ahụ mere na smartphones, ọ bụghị gam akporo ka mma ma iOS adịghị njọ. Ha dị iche na ebe ọ bụ na-amasị m ma sistemụ arụmọrụ, m na-ejikwa ha mgbe niile.
Blogger nwere mmasi banyere teknụzụ ọhụụ, dị njikere ịkekọrịta ihe ọmụma m site na ịde nkuzi na nyocha ka ndị ọzọ nwee ike ịmata njirimara niile ngwaọrụ dị iche iche nwere. Enweghị ike iche n'echiche ihe ndụ dị tupu ịntanetị!
Onye nchịkọta akụkọ n'oge m nwere ohere. Na -ahụ maka ekwentị ma na -achọpụta mgbe niile ụzọ ọhụrụ iji jiri ya ka mma, ngwa ọhụrụ ma ọ bụ egwuregwu ịkọrọ gị.
Anọ m na kọmputa ebe a mụrụ m. Abụ m ọgbọ na-etolite na Windows XP ma mesịa gafere Vista. M na-eji macOS kwa ụbọchị ma na Linux. Enwere m mmasị iji ụdị usoro dị iche iche na-agagharị ma ọ bụrụ na ha akpọghị m onye nzuzu, m ga-ebu gam akporo n'akpa aka ekpe m na iPhone n'aka nri m.
Omiiko banyere ụwa nke teknụzụ etinyere ọ bụla n'ubi iji kwado anyị ụbọchị taa. Mmasị m nwere maka ngwaọrụ elektrọnik na-eduga m n’inyocha ha site n’akụkụ dị iche iche, ịmara ha na inwe ike iji ha eme ihe n’ụzọ kasị mma, si otú ahụ na-enye aka ná ndụ ha bara uru ruo ogologo oge o kwere mee.
Onye edemede na onye editọ ọkachamara na kọmputa, ngwaọrụ, ekwentị, smartwatches, wearables, sistemụ arụmọrụ dị iche iche, ngwa ọdịnala na ihe ọ bụla metụtara geek. Amalitere m n'ụwa nke teknụzụ kemgbe m bụ nwata, kemgbe ahụ, ịmatakwu banyere ya kwa ụbọchị bụ otu n'ime ọrụ m kacha atọ ụtọ.
Site na nwata m hụrụ teknụzụ n'anya, ọkachasị ihe jikọrọ ya na kọmputa na Sistemụ Ọrụ ha. Na ihe karịrị afọ 15, ahụrụ m GNU / Linux n'anya na ihe niile metụtara Free Software na Open Source. Maka ihe a niile na ndị ọzọ, n'oge a, dị ka onye injinia Kọmputa na ọkachamara nwere asambodo mba ụwa na Linux Operating Systems, ejiri m mmụọ na-ede akwụkwọ na ọtụtụ afọ ugbu a, na teknụzụ dị iche iche, weebụsaịtị na mgbakọ na mwepụ, n'etiti isiokwu ndị ọzọ. N'ime nke a, m na-ekerịta gị kwa ụbọchị, ọtụtụ n'ime ihe m na-amụta site na isiokwu bara uru ma bara uru.
Almeriense, onye ọka iwu, onye editọ, geek na onye hụrụ teknụzụ n'anya. Na-ebute ụzọ mgbe niile n'ihe banyere ngwanrọ na ngwaike, ebe ọ bụ na ngwaahịa PC mbụ m na-eguzogide m dabara n'aka m. Na-enyocha mgbe niile, na-anwale ma na-ahụ site na echiche dị oke mkpa ihe teknụzụ kachasị dị ugbu a ga-enye anyị, ma na ngwaike na ngwanrọ. M na-agbalị ịgwa gị ihe ịga nke ọma, ma m na-enwekarị mmejọ. Ana m enyocha ngwaahịa ma ọ bụ na-eme nkuzi dị ka a ga - asị na m na - egosi ya ndị ezinụlọ m. Odikwa na Twitter dika @ miguel_h91 na Instagram dika @ MH.Geek.
M na-arụ ọrụ dị ka onye prọfesọ nke GNU / Linux usoro nchịkwa nchịkwa iji kwadebe maka asambodo LPIC na Linux Foundation. Onye dere Bitman's World, akwụkwọ nkà ihe ọmụma na microprocessors, na akwụkwọ ntuziaka teknụzụ ndị ọzọ. Enwere m mmasị na isiokwu gbasara sistemụ arụmọrụ yana nhazi kọmputa. Nke ahụ gụnyekwara ngwaọrụ mkpanaka, ebe ọ bụ na ha bụ kọmpụta nwere sistemụ arụmọrụ Android.
Teknụzụ na-anụ ọkụ n'obi. Ọkachamara kọmputa nwa oge nwere mmasị na isiokwu dị iche iche dị iche iche dị ka akpaaka ụlọ ọrụ, ụwa android, egwuregwu vidiyo na ọbụna ụwa moto. Ngwa mbụ m chetara bụ nke Sony HitBit na Commodore.
Onye nta akụkọ nweere onwe ya ọkachamara na egwuregwu na teknụzụ. M na-edekwa na todoandroid.es na http://xn--superacin-d7a.es/
Ọkọ akụkọ ihe mere eme site na ọrụ, onye hụrụ Teknụzụ Ọhụrụ n'anya, a na m eme mgbanwe mana agbanyeghị m ịhapụ ịhụnanya m maka ngwa, teknụzụ ọhụrụ na sọftụwia efu. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, arara m onwe m nye ịnụ ụtọ ma na -agbalị ịgbasa okwu nke Free Software, ụzọ siri ike nke m ka na -agbaso ...
Iji ngwa kọmputa ọ bụla nwere ọtụtụ bọtịnụ na-ejegharị bụ agụụ m. Azụrụ m ekwentị mbụ m na 2007, mana tupu, na mgbe ọ gasịrị, ọ masịrị m ịrara onwe m nye ịnwale ngwa ọ bụla na-abata n'ụlọ ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-amasị m iso onye ọzọ ga-esonyere m ịnụ ụtọ oge m nwere karịa.